Raikitra ny fifandraisana mahazo Mampiaraka psikolojia
Mamaky ity amim-pitandremana: anao sy ny olon-tiany ny fifandraisana dia tokony ho efa lehibe ny fiainana tsaratsara kokoa. Raha tsy izany no atao, dia mazava ho azy fa misy zavatra tsy mety. Ampidiro ny E-Mail adiresy sy ny tsindrio eo amin’ny ‘Ok, andeha isika. Ankoatra izany, ianao dia hahazo maimaim-poana amin’ny alalan’ny mailaka, ny zava-miafina Gazety: ampidiro ny E-Mail adiresy sy ny tsindrio eo amin’ny ‘Ok, andeha isika. Ankoatra izany, ianao dia hahazo maimaim-poana amin’ny alalan’ny mailaka, ny zava-miafina Gazety: tianao na inona na inona mihoatra noho ny fifandraisana mafy orina. Misy ankehitriny ny fitsipika tokony ho fantatrao momba raikitra Mba mahazo sipa.
Ve ianao te-hianatra ny fomba azonao atao haingana araka izay azo atao raikitra ny fifandraisana. Ny tanjona maro ny olona no manana ny tapaka sipa. Ato amin’ity lahatsoratra ity aho dia antsoina hoe fitsipika Volamena ho anao izay tokony ho fantatrao: Fivoriana ihany no miaraka amin’ny vehivavy, dia malala-tanana amin’ny sakafo hariva, voninkazo sy ny fanomezam-pahasoavana, sy handefa anareo tsy tapaka SMS na miantso anao isan’andro. Raha toa ianao, dia ho tsara vintana ianao no mila izany. Satria ny zava-misy: Raha ny efa lany andro ny fomba niasa nandritra ny Daty ny raibe sy renibe, miaina amin’izao fotoana izao amin’ny fotoana samy hafa, sy ny samy hafa ny fotoana antso ho amin’ny lalàna hafa. Ary raha ny hevitrao ny iray andro ny ankamaroan’ny bandy fa, raha toa ianao te-hanambara ny ankizivavy, dia mety tsy mampiasa afa-tsy vehivavy ianao, raha Mampiaraka, dia ianao scoundrel. Ankehitriny isika dia mahafantatra izany tsara kokoa: Tsy manaiky afa-tsy ny vehivavy, raha toa ka MANAPA-kevitra, ohatra, amin’ny alalan’ny fifandraisana, na ny Mba asio tombo-kase ny fifandraisana amin’ny fanambadiana. Raha tsy izany, dia TSARA kokoa ny hevitra mba hihaona zazavavy maro, asehony anao ny samy hafa toetra sy fiaviana, ary hahatonga anao hevitra tsara kokoa ny karazana zazavavy izay tianao. Zazavavy hafa ny angon-drakitra lehibe, satria hahatonga anao ho manintona kokoa karazany dia manorina ny fahatokisan-tena, dia mampitombo ny resaka fahaiza-manao, ary dia manokatra ny saina. Indro misy soso-kevitra: raha Tokony hanohy avy hatrany ny fifandraisana matotra miaraka amin’ny vehivavy, ny strut fa tsy maro tsotsotra, tsy manan-kery ny fifandraisana amin’ny vehivavy isan-karazany. Mba hifantoka fa tsy ianao mba hitady ny tena fitiavana, dia tsy maintsy mifantoka mba hiala voly, mba hitarika ny fiainany, ary ny Iray amin’ireo ZAVATRA Lehibe ho hitanareo rehefa mihaona sendrasendra fotsiny, mihoatra noho ny vehivavy iray, dia ity: ny ankamaroan ny fitsipika izay nanaraka tamin’izany fotoana ho Daty, sy ny vehivavy, rehefa tsy misy ny Firaisana ara-nofo amin’ny andro voalohany tsy mampihatra. Inona no tsara, dia tonga saina ihany koa fa ianao dia ho mahomby kokoa amin’ny vehivavy, raha toa ka mandika ireo lalàna ireo. Fa angamba ny tena zava-dehibe dia, na tsy ofisialy aza, maro ny vehivavy miaraka amin’izay koa ny mamantatra ny angon-drakitra, mba hanampy anareo, inona no TENA tianao amin’ny fiainana, indrindra rehefa tonga ny fotoana maharitra, ary raikitra ny fifandraisana. Avy tany, dia afaka manao fanapahan-kevitra noho ny fitiavana ny fiainana raha toa ka mivory tsotra ny vehivavy, ary ny nihomehy, na raha te-hipetraka amin’ny toerana tena vehivavy ho an’ny Sisa amin’ny fiainanao mba hiala sasatra na inona na inona eo. Ianao no mitondra ny datin ny vehivavy (na dia ao amin’ny fifandraisana amin’ny vehivavy), ary taty aoriana dia nivadika fa ny ratsy toetra no abgeturnt anao, fa satria efa nanao ny tenanao ho azy sahady, ary mifikitra aminy, raha tokony ho ny farany. Izany no antony tokony zavatra REHETRA vehivavy miadana. Ny ankamaroan’ny vehivavy dia mandeha tsara, rehefa fotoana tsara fa rehefa ny fotoana dia mafy izy ireo, dia maneho ny tena endriny. Ny toro-hevitra dia: Raha toa ianao mitady mafy ny fifandraisana, manao fanoloran-tena indray mandeha ihany ilay vehivavy nandritra ny telo volana. Izany dia hanome anao fotoana ampy mba hiala voly, hahalala ny tsara ianao SY hahita ny fomba dia mitondra tena amin’ny fotoana ratsy. Amoron-dalana, tsy maintsy manao izany fanavahana izany eto: izany no tsy midika hoe miadana fotsiny mba hamehy avy hatrany. TSY midika izany fa hoe tsy maintsy hifindra zavatra moramora handroso, na izay mandray ny fotoana mba hitondra zavatra ho any amin’ny dingana manaraka.
Mbola lavitra izany
Raha ny marina, rehefa tonga ahoana ianao ara-batana sy ara-tsaina akaiky, manoro hevitra anareo aho mba hifindra HAINGANA miaraka aminy.
Ianao, hihaona aminareo, hamitaka sy
Raha ianao ny karazana izay mahazo ny vehivavy tsy tapaka ao anatin’ny roa andro voalohany ao am-pandriana, dia ny vehivavy no manomboka ny mahita anao ho toy ny benchmark manohitra izay mitsara ny hafa rehetra ry zalahy eo amin’ny fiainanao. Ary raha TENA tsara no, avy eo ianao dia TENA sarotra ny manapa-kevitra ho an’ny lehilahy iray hafa. Eto ny fahadisoan-kevitra hafa fa maro ny lehilahy mino hafahafa ny fomba mbola: raha misy olona ao sipa ny-sipa amin’ny fifandraisana, dia TSOTRA, ny fahalalahana, tahaka ny Fialam-boly sy ny asa ny vondrona tsy maintsy manome ny zavatra momba ny fahalalahana, na dia.
Fa tsy feo toy ny be mahafinaritra, tsy izany
Raha toa ka tsy maintsy hanome ny tsy mampahazo aina ny fiainana, dia nahoana no ho ao amin’ny fifandraisana. Noho izany, raha toa ka ataovy mafy orina ny fifandraisana izy ireo, dia hiala amin’ny fiainanao, ary ataovy azo antoka ianao handao anao ny fiainana. Tsy hahita anao ho olon-tiany, raha toa ka efa manana fiainana mahaliana. Ny fifandraisana dia tsy ho sambatra ianao, raha toy ny olona iray dia afa-po. Fialam-boly mba hanatevin-daharana ireo vondrona, dia mivory ny olona, miaina ny fiainana izay manome ny fiainana ny olona hafa ny lanjany, sy ny sisa. Ny toro-hevitra dia: Hitsena anao alternating amin’ny roa na telo ny vehivavy sy ny isaky ny mahita azy isaky ny telo volana, indray mandeha isan-kerinandro. Raha toa ka misafidy ny tsy teny an-dalana fa tsy toy ny iray amin’ireo vehivavy mandre ny hahita anao (na fotsiny ho namany azy) ary avy eo dia hihaona amin’ny vehivavy hafa, mba hitandrina ny Fiarahana Nifandimby tao anatin’ny roa na telo. Farany, ianao hihaona ny vehivavy iray no tonga lafatra mendrika ny tonga lafatra ny fiainana, ny adala noho ny anao, ary ianao hanao tsirairay ny fiainana tsaratsara kokoa. Te lehibe kokoa ny toro-hevitra amin’ny fomba, dia efa tonga LAFATRA ny sipa mba hahitana raha ao amin’ny dingana tena mahafinaritra sy tsara indrindra ny Firaisana ara-nofo
← Tsara Indrindra Maimaim-Poana Amin'ny Aterineto Mampiaraka Toerana
Mampiaraka toerana videos - VIDEO MAMPIARAKA →